खाना खराब दिएको भन्दै दुलही नलिई फर्किए जन्ती – PathivaraOnline
Home > समाचार > खाना खराब दिएको भन्दै दुलही नलिई फर्किए जन्ती
खाना खराब दिएको भन्दै दुलही नलिई फर्किए जन्ती
admin December 7, 2020 December 7, 2020 समाचार, समाज	0
खाना खराब दिएपछि दुलहीनै नलिई जन्ती फर्किएका छन् । दुईदिन अगाडि भारतमा खानाको विषयमा विवाद हुँदा दुलहीनै नदिएपछि जन्ती रित्तै घर फर्किएका हुन्।
युपीको अलिगढमा भएको विवाहमा खराब खानाको विषयलाई लिएर दुलाहा र दुलहीका बीचमा घमासान झगडा भएको खबर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भईरहेको छ । लामो समयसम्म दुई पक्षबीच मेलमिलाप गराउन खोजिए पनि दुबै पक्ष तयार नभएपछि घटना प्रहरीसम्म पुगेको हो।
मेलमिलाप गराउन खोजेपनि दुबै पक्ष तयार नभएपछि बेहुला पक्षले खानाको एक लाख १२ हजार रुपैंया तिरेर जन्ती फर्किएका हुन् । घटना थाना जम्वा इलाको गाउँ समस्तपुर कोटाको भएको हो। बुधबार स्थानीय युवतीसँग बिहेका लागि जन्ती गएका थिए।
जन्तीको स्वागतपछि मध्यरात भोजन चलिरहेको थियो । त्यसैबेला दुलाहाका भाईले खानामा कमी भएको बताए । यो कुरा दुलहीका भाईलाई चित्त बुझेन । पहिले बेहुला र बेहुलीको भाईबीच बहस चल्यो, त्यसपछि दुबै पक्ष हात हालाहालको स्थितिमा उत्रिएका थिए। **समाचारकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस् ***
रुपा र कृष्णको जस्तै अर्को नमुना जोडी, परिवार छोडेर साथ दिन आइन् सितल (भिडियो हेर्नुस्)
सपनालाई अर्थमन्त्रीले भेट्न नपाउदै एनआरएनले गर्यो लाखौं नगदसहित भब्य सम्मान, एनआरएनले सपनालाई बिश्व घुमाउदै (भिडियो)
श व लुकाउन खोज्‍ने बाबु-छोरा नै यसरी पक्राउ परे…
फेरि प्रदेश साँसदहरूकाे ताण्डव यस्तो! राजधानीकै कारण फेरि राष्ट्रिय सम्पति तो’डफो’ड (भिडियो)
त्रिशुलीमा हेलिनु अघि यिनकै हाेटलमा छोरालाई तातो दुध खुवाए, अनि…. पछुताउँदै भन्छिनः बरू मै पालिदिन्थे (भिडियो हेर्नुस्)
यस्ता स्त्री सँग बिवाह गर्ने पुरुषको चम्कने छ भाग्य ? यस्ता महिला बढी प्रभावशाली र सुन्दर! पूरा पढ्नुहोस्
माताा पाथिभराको दर्शन गर्दै ०७७ साल माघ ९ गते शुक्रबार, हेर्नुहाेस तपाईहरूको अनुसारकाे भाग्य!